Khayaanada naxdinta leh - Amjambo Africa
Marka xubin qoyska ka mid ah ama saaxiib dhow uu ka gudubto, waa wax dabiici ah in la doonayo in loo sheego sheekadaas qofka. Inbadan waxay doortaan inay maamuustaan ​​kuwa ay ku lumeen iyagoo wadaaga ereyga naxariis leh ee ku qoran tayo xun ama ku dhajinta xusuusta ee warbaahinta bulshada. Iyada oo aan loo eegin sida dhimashada loo xumaado ama sida nolosha loo dabaaldego, faahfaahinta la wadaago ayaa mararka qaar ku dhici kara gacmaha khayaanada ee raadinaya inay fuliyaan khayaanada khayaanada. Noocan khayaanada ah, khayaanada khayaanada ka mid ah kuwa xishoodka iyo warbaahinta bulshada si ay u helaan macluumaad sida taariikhaha dhalasho, magacyada carruurta – wax alla wixii ay ka wada shaqeyn karaan khiyaanooyin badan oo khiyaano ah. Qoysaska qofka dhintay ee la jecel yahay ayaa iska ilaalin kara in lagu xidho oo ay diirada saaraan bogsashada haddii ay yaqaanaan waxa loo baahan yahay.
Khayaanada deynta ee aan la dayn
ka dib markii aad heleyso faahfaahinta shaqsiga ee xubnaha qoyska ee qofka dhintay, khayaanada ayaa laga yaabaa inay la xiriiraan iyada oo ay la socdaan sheegashooyinka deynta aadka u wanaagsan. In kasta oo la iska dhigayo inuu noqdo dayn aruuriyaha, waxay u sheegaan xubinta qoyska inay mas’uul ka yihiin deynta qofka dhintay. Sababtoo ah khiyaanada waa ogyahay macluumaadka shaqsiyeed ee ku saabsan xubnaha qoyska iyo kuwa la jecel yahay ee lumay, waxay u muuqan karaan kuwo sharci ah. Khayaanada ayaa ku mashquulsan dadka inta lagu jiro mudada nuglaanta. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inay yiraahdaan wax la mid ah, \_”ninkaaga wuxuu ku urursaday $ 1,500 deyn taas oo dhaaftay. Haddii aanaan helin lacag bixinta maanta, waa inaan u dirnaa koontadaada aruurinta. \_” Waxay rajeynayaan in xubinta qoyska ka mid ah ay bixin doonto lacag bixin iyaga oo aan waqti loo qaadin inuu wax ka fikiro, maadaama laga yaabo in lagu cuno murugo ama shucuur kale. Taabadalkeed, dadku waa inay isqabsadaan oo ay sameeyaan waxoogaa cilmi baaris ah si ay u eegaan haddii sheegashadu ay tahay mid sharci ah.
Khayaanada xaq u yeelashada halka khayaanooyinkii hore ay kaxeysteen dhibanayaashu iyagoo adeegsanaya cabsi sida xeelad, tanina ma qabato. Taabadalkeed, khayaanadaani waxay u ekaan karaan sidii iftiin dhalaalaya inta lagu jiro wakhti mugdi ah. Halkii ay lacag ku yeelan lahayd, khayaanada la xiriir xubnaha qoyska oo sheeganaya inay xaq u leeyihiin lacag. Tusaale ahaan, waxay sheegan karaan in xubinta qoyska ka mid ah ay dhaxal ka tagtay dhaxalka, laakiin kaliya waxay u baahan yihiin inay bixiyaan khidmad si ay uga baaraandegaan. Dadku waxay sii daayaan waardiyayaashooda oo dhibbanayaasha ku dhaca khayaanadaas, maadaama ay rabaan inay rumaystaan. Xubnaha qoyska waa inay weydiistaan ​​magaca qofka soo wacaya, nambarka, iyo shirkadda si aad dib ugu soo wacdid. Haddii ay istaagaan ama isku dayaan inay beddelaan wada hadalka, waxay u badan tahay khayaano. Haddii ay bixiyaan macluumaad, dadku wali waa inay isqabsadaan oo ay sameeyaan xoogaa cilmi baaris ah si loo go’aamiyo haddii xaq u lahaanshaha uu yahay mid sharci ah.
Tilmaamaha guriga Markii qof dhaafo, waqtiga iyo taariikhda aaska ayaa badanaa lagu wadaagi karaa meel tahriib ama khadka tooska ah. Tuugada ayaa laga yaabaa inay ka faa’iideystaan ​​adeegyada aaska loona qorsheeyaan boo deganaanshaha waqtiga saxda ah ee saxda ah, iyadoo mala awaalka ah in xubnaha qoyska ay ku jiri doonaan adeegga halkii guriga guriga. Xubnaha qoyska waxay ka fogaadaan tuugada suuragalka ah iyagoo ka tagaysa cinwaanka qofka dhintay ka Gacanta ama weydiinta qof aamin ah oo aan ka soo qeybgalin aaska si uu u sii joogo guriga ama abaarta inta lagu jiro adeegga.
Sida ugu wanaagsan ee dadku ay naftooda uga badbaadinayaan khayaanada geerida waa in aan laga fiirsan macluumaadka shaqsiyadeed ee dhaxalka, ama meelka kale ee ku dhawaaqida ama dabaaldega nolosha la wadaago. Sidoo kale, haddii dadku ogaadaan waxa la iskaga raadinayo, waxay ka fogaan karaan khayaanada waxayna diiradda saari karaan bogsashada.
PreviousHubso in lacagtu ay ka rabto halka aad rabto markii aad ku dhinto
NextKarkootne Hibiscus waxay cabtaa cabitaannada Maine